Ny tombotsoan’ny fiaraha-miasa amin’Andriamanitra
"Fa mpiara-miasa amin' Andriamanitra izahay; ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra - 1Kor. 3:9.
Raha mba tsapanareo mantsy fa hay Andriamanitry ny lanitra dia mandray ireo izay efa nikomy nanohitra ny fanjakany, ka milaza amin'izy ireo hoe: Azonareo atao ny ho tonga mpiara-miasa Amiko', dia hanokana rnanontolo ny tenanareo ho Azy ianareo (,..) Moa tsy mahafinaritra ve raha toa ka afaka mandray ilay harem-pahasoavana mikoriana avy amin'Andriamanitra isika, ka hiara-miasa aminy amim-pirindrana? Inona moa no tadiavin'Andriantanitra amintsika izay mahantra sy malemy ary osa? Inona no azony tantaraina amintsika? - Ny zavatra rehetra, raha toa isika manaiky ny hamoy ny zava-drehetra. - Y1, 3 May 1900.
Rehefa niantso ahy fony fahazaza mba hiasa ho Azy Andriamanitra, dia nanontany tena mandrakariva aho hoe: `Inona no azoko atao? ' Hoy Andriamanitra: Tanteraho ny irako, zany koa no ilaintsika rehetra tanterahina. Tiako ny hilaza aminareo izay zavatra azonareo atao, na izay zokiolona indrindra na izay tanora indrindra: azonareo atao ny ho tonga mpiara-miasa amin'Andriarnanitra, (...) sy aminareo samy ianareo. Tsy hianatra velively ny hanome fahafaham-po ho an'ny tena samirery ianareo. Ho tsapanareo fa tompon'andraikitra amin'ilay hery miasa mangina aterakareo ianareo.
« Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay;ary sahan'Andriamanitra». Hevero ange izany! Mikatsaka mandrakariva ny hamolavola ny saina Izy, tahaka antsika miasa ny tany. Miezaka mandrakariva Izy hamafy voa izay hitondra vokatra hanome voninahitra ho Azy. Trano arafitr'Andriamanitra hianareo, tsy manorina anefa Izy rata tsy hikarakara anareo. YI, 3 May 1900.
Raha manolotra ny fiainantsika hanompo an'Andriamanitra isika, dia tsy hapetraka na oviana na oviana eo amin'ny toerana tsy ahazoany mikarakara - HF t. 171.
Novohan'i Jesôsy ny fahafenoan'ny fitiavany tsy hay lazaina araka ny maha-Andriamanitra azy, ka hoy Izy manao hoe: "Mpiara-miasa amin'Andriamanitra hianareo." L 1a,1894